Imbali emfutshane yeKonstantinople- Istanbul, eTurkey
Imbali emfutshane ye-Istanbul, eTurkey
Istanbul yidolophu enkulu kunazo zonke eTurkey kwaye iphakathi kwezi-25 ezinkulu ezisemadolophini kwihlabathi. Itholakala kwi- Bosporus Strait kwaye igubungela yonke indawo yePhondo legolide. Ngenxa yobukhulu bayo, i-Istanbul iya kwi-Yurophu ne-Asia. Isi sixeko siphela semetropolis yehlabathi ukunyuka kwelinye ilizwekazi .
Isixeko sase-Istanbul kubalulekile kwi-geografi kuba inembali ende ebonisa ukunyuka nokuwa kweemibuso ezidumileyo emhlabeni.
Ngenxa yokuthatha inxaxheba kuloo mibuso, i-Istanbul iye yafumana utshintsho lwamagama athile kwimbali yayo ende.
Nangona i-Istanbul yayinokuthi ihlalwe ngowe-3000 BCE, yayingesiyidolo kwaze kwafika iikholoni zamaGrike kuloo ndawo kwi-7th Century BCE. La macoloni ayekhokelwa nguKumkani Byzas kwaye ahlala apho ngenxa yendawo eqhelekileyo kwi-Bosporus Strait. UKumkani Byzas wabiza isixeko saseByzantium emva kwakhe.
Ubukhosi baseRoma (330-395 CE)
Ukulandela ukuphuhliswa kwayo ngamaGrike, iByzantium yaba yinxalenye yoBukumkani baseRoma kuma-300s. Ngeli xesha, umbusi waseRoma uConstantine Omkhulu waqalisa umsebenzi wokwakha wokwakha umzi wonke. Injongo yakhe yayikuyenza ibe yinto ecacileyo kwaye inike izikhumbuzo zesixeko ezifana nezo zifumaneka eRoma. Ngo-330, uKonstantine wachaza isixeko njengenkunzi yombuso wonke waseRoma waza wabiza ngokuthi uConstantinople.
Ubukhosi baseByzantium (eMpuma yamaRoma) (395-1204 kunye no-1261-1453 CE)
Emva kokuba uKonstantinople wayebizwa ngokuba yiNtloko yoBukumkani baseRoma loo mzi wanda kwaye waphumelela. Emva kokufa kuka-Emperor uTheodosius I ngo-395, nangona kunjalo, ukuphazamiseka okukhulu kwenzeni ebukumkanini njengoko oonyana bakhe bahlula ngokupheleleyo umbuso.
Ukulandela ulwahlulo, uConstantinople waba yinkunzi yeBukhosi baseByzantium kuma-400.
Njengengxenye yoBukhosi baseByzantine, loo mzi waba ngumGrike ngokuchasene nomntu owayekade engumBuso WaseRoma. Ngenxa yokuba uConstantinople wayephakathi kweli lizwekazi, laba liziko lezorhwebo, inkcubeko, idiplomacy, kwaye yanda kakhulu. Ngo-532, ke, u- Nika Revolt olwachasene noRhulumente waphula phakathi kwabantu besixeko kwaye wayichitha. Emva koko, emva kokuvukela, iConstantinople yakha kwakhona kwaye ezininzi izikhumbuzo eziye zazakhiwa-enye yazo yayinguHagia Sophia njengeConstantinople yaba yiziko leCawa yamaGrith Orthodox.
Ubukhosi baseLatin (1204-1261)
Nangona iConstantinople iphumelele kakhulu kwiminyaka emashumi emva kokuba yinxalenye yolawulo lwaseByzantine, izinto ezikhokelela ekuphumeleleni kwayo zenza ukuba ixhoba lokunqoba. Kwiminyaka yeminyaka, amasosha avela ngaphaya kweMbindi-Mpuma ahlasela isixeko. Kwaphela ixesha lilawulwa ngamalungu eSigqeba sesine emva kokuhlambulukiswa ngo-1204. Emva koko, uConstantinople waba ngumbindi wobukhosi bamaKatolika baseLatin.
Njengoko ukhuphiswano lwaluqhubeka phakathi kobukhosi bamaKatolika bamaRoma kunye ne-Greek Orthodox yaseByzantine, uBonstantinople wabanjwa phakathi kwaye waqala ukubola.
Kwangena kwiingxowa-mali, abantu babenqabile, kwaye kwaba nzima ukuhlaselwa ngokuqhubekayo njengezithuba zokhuselo ezijikeleze isixeko. Ngo-1261, phakathi kwesi siganeko, ubukhosi baseNicaea babuyisela iKonstantinople kwaye babuyiselwa kwiBukhosi baseByzantine. Ngelo xesha, amaTurkey ase-Ottoman aqala ukuyisa iidolophu ezijikeleze iKonstantinople, ngokukhawuleza ukuyinqumla kwiindawo ezininzi ezikufutshane.
Ubukhosi base-Ottoman (1453-1922)
Emva kokuba bebuthathaka kakhulu ngenxa yokuhlaselwa rhoqo kunye nokunqunyulwa kwabamelwane babo ngamaTurkey ase-Ottoman, uConstantinople wahlulwa ngokusemthethweni yi-Ottomans, ekhokelwa nguSultan Mehmed II ngoMeyi 29, 1453 emva kokungqingwa kweentsuku ezingama-53. Ngexesha lokungqingwa, umbusi wokugqibela waseByzantine, uConstantine XI, wafa ngoxa evikela isixeko sakhe. Ngokukhawuleza, uConstantinople wabizwa ngokuba yiNtloko yobukhosi base - Ottoman kunye negama layo latshintshwa laba yiIstanbul.
Emva kokulawula umzi, uSultan Mehmed wazama ukuvuselela i-Istanbul. Wadala i-Grand Bazaar (enye yezona ndawo zithengiswa kakhulu kwiimarike ezisehlabathini), wabuyisela abahlali bamaKatolika namaGreek Orthodox. Ukongeza kulabahlali, wazisa amaSilamsi, amaKristu, kunye namaYuda ukuba athathe abantu abaxubekileyo. U-Sultan Mehmed naye waqalisa ukwakha izikhumbuzo zakhiwo , izikolo, izibhedlele, iibhagi zaseburhulumenteni kunye nemikhosi emikhulu yobukhosi.
Ukususela ngo-1520 ukuya ku-1566, iSuimiman i-Magnificent yayilawula uMbuso wase-Ottoman kwaye kwakukho impumelelo enkulu yobugcisa kunye nezobugcisa ezenza ukuba yinkcubeko enkulu, yezopolitiko kunye nezorhwebo. Ngeli-1500s, isixa sabantu besixeko sakhula saba ngabemi abayizigidi ezili-1. Ubukhosi base-Ottoman babulawula i-Istanbul kwaze kwaba yinto enqotyisiweyo kwaye ithathelwa ngabalingani kwiMfazwe Yehlabathi I.
IRiphabhliki yaseTurkey (1923-namhlanje)
Ukulandela umsebenzi walo ngabadibeneyo kwiMfazwe Yehlabathi I, iMfazwe yaseTurkey yokuzimela yenzeke kwaye i-Istanbul yaba yinxalenye yeRiphabhuliki yaseTurkey ngo-1923. Istanbul yayingeyona yipropati yeriphabhlikhi entsha kunye neminyaka yokuqala yokubunjwa kwayo iIstanbul yayinganyanzelwanga kwaye utshalomali lwangena kwinkunzi entsha ye-Ankara. Kwiminyaka ye-1940 kunye neye-1950 nangona kunjalo, i-Istanbul yavela kwakhona izikwere zorhulumente ezintsha, i-boulevards kunye neendlela. Ngenxa yokwakhiwa, ezinye izakhiwo zembali zedolophu zachithwa.
Ngama-1970, inani labantu base-Istanbul landa ngokukhawuleza, bangela ukuba isixeko siphumelele kwiidolophana kunye namahlathi athile, ekugqibeleni yakha i-metropolis enkulu.
Iindawo ezininzi zembali ze-Istanbul zongezwe kwi- UNESCO yeLifa leMveli kwi-1985. Ukongezelela, ngenxa yobume bayo njengamandla amakhulu ehlabathi, imbali yayo, ukubaluleka kwenkcubeko kwiYurophu kunye nehlabathi, i-Istanbul iye yonyulwa i-European Capital of Culture ngo-2010 yi- European Union .
Eyona ndlela ihamba phambili yePortstock Performances
Uluphi Ubomi obungenziNjongo?
Funda ezi zi-20 eziqhelekileyo zeScuba Diving Hand Signals
Yintoni iSikole soKhuseleko kwi-College Admissions?
I-Valentine's Day Stencils yamahhala
7 Iimfihlelo zoPhumelelo ngesiNgesi 101
Indlela Yokufumana I-Itch Yakho Yendalo
Iimfazwe eziMnandi kunye eziMbi kakhulu kwiVietnam
Indlela yokufunda i-Medieval Play 'Everyman'
Yintoni iPlasma? (I-Physics neKhemistry)
Iintlanganiso ezinkulu ze-Bigfoot - Iindaba eziNyaniso
Iingxoxo zeeNgxoxo zeeNgcaciso zeZikolo eziPhakamileyo
Inkqubo yokuHlala kunye noHlelo lokuSebenza ngaphandle
Iikhompyutyana ezingama-20 zamaHlabathi eziKhenketho
Ukubuyiswa kweSaturn kunye nokuBaluleka kwayo kwi-Astrology
Iqela leTiger leThuni eliLahlayo
Ezili-10 zezona ziNkokeli eziNkohlakalo kwiMbali
300 Igalari yezithombe
Uluhlu lweeNtlomelo (amaqela e-Element)